रोचक Archives - Page 12 of 16 - Samudrapari.com
१२ करोडको कुकुर चोरी गर्ने पक्राउ
एजेन्सी – आयरल्यान्डको प्रहरीले एउटा सिकारी कुकुर चोरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । यो कुकुरको मूल्य १० लाख युरो अर्थात् करिब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । क्लेयर्स रकेट नामको यो कुकुरलाई केही पहिले टिपरेरी काउन्टीको गोल्डन नामको ठाउँबाट चोरिएको थियो । त्यतिवेला यो कुकुर आफ्नो प्रशिक्षकसँग थियो । यो चोरीको तुलना सन् १९८३ मा भएको रेसको घोडा सेरगरको अपहरणसँग गरिएको थियो । प्रहरीले क्लेयर्स रकेट ‘सुरक्षित तथा ठीक अवस्था’मा उद्धार गरिएको जनाएको छ । आयरल्यान्डको जासुसी संस्थाको एक विभाग...
काठमाडौं – बालबालिकालाई एक वर्ष पुग्नु भन्दा पहिलेदेखि नै बदाम खुवाउने गरेमा एलर्जीको सम्भावना कम गर्न सकिने डाक्टरले बताएका छन् । अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युड अफ हेल्थले गरेको अध्ययनमा एक वर्ष पुग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै बदाम मिसिएको खानेकुरा खुवाएमा बालबालिकामा गम्भीर खालको एलर्जी हुने सम्भावना कम देखिएको हो । यो अध्ययनका आधारमा बालबालिकालाई चारदेखि ६ महिनादेखि नै बदाम मिसिएको खानेकुरा खुवाउनुपर्ने डाक्टरको सुझाव छ । यसले गर्दा बालबालिकामा खानेकुराका कारण हुने एलर्जीको सम्भावना घट्ने...
काठमाडौं – प्रविधिको बिकाससंगै नयाँ-नयाँ कुरा पता लगाउंदै अगाडी बढेको आजको विश्वमा दिनानुदिन नयाँ-नयाँ प्रविधिको बिकास भईरहेको छ । आजको युगमा मोबाइल नचलाउने कमै मात्र भेटिन्छन् । नयाँ-नयाँ एप्सको कारण युवापुस्तालाई धेरै काममा सहज हुँदै गएको छ । यस्तै एक निकै खुसीको खवर रोमान्टिक जोडीहरुलाई छ जो एक अर्काबाट टाढा छन् । किसेन्जर मार्फत च्याटमा एक अर्कालाई किस खान सकिने उपकरण निर्माण भएको छ । सिटी विश्वविद्यालय लण्डनमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी एम्मा यान झाङले किसेन्जरको आविष्कार गरेकी छिन् । ...
काठमाडौं – मोटो शरीरलाई चिकित्सकहरू रोगको घरको संज्ञा दिन्छन् । मोटो शरीर भएकालाई सुगर, मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसो त मोटोपनले सबैखाले रोगलाई निम्ता गरिरहेको हुन्छ । हेर्दा पनि मोटो शरीर आकर्षक देखिँदैन । तर, मोटोपन घटाउन अधिकांशले चाहेर पनि नसकेको गुनासो गर्छन् । डा. प्रकाशराज रेग्मीले मोटोपन घटाउने केही उपाय सिकाएका छन्ः गुलियो र चिल्लो त्याग्नुहोस् शरीरको मोटोपन घटाउने हो भने गुलियो र चिल्लो खानेकुरा त्याग्न सक्नुपर्छ । चिनी र चिनीबाट बनेका ...
जापानमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार मृगौला बिगार्ने १० बानीहरु यस्ता छन्
काठमाडौं —जानेर वा नजानेर हुने हाम्रा दैनिक आदतले पनि किड्नीलाई असर गरिरहेको हुन्छ । प्रायः मानिसको स्वास्थ्यको चासो रहेको किड्नीमा असर हुुनुमा मानिसको लापरबाही मुख्य जिम्मेवार छन । जुन यस प्रकार छन्ः -चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्याक्टेरिया उत्पन्न गर्छ । – खानामा धेरै नून वा अन्य नूनिलो खानेकुराले पनि किड्नी खराब बनाउछ । नूनले ब्लड प्रेसर गराउँछ, जसको असर किड्नीमा पर्छ । - पिसाब...
काठमाडौं – सोमबार व्यवस्थापिका संसदभित्रै शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले खैनी खाएर फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । सोमबार बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु उभिएर विरोध जनाए । केसीले मुखमा च्यापेको खैनी जिब्रोको सहायताले ओठमा ल्याए । आफ्नै दाहिने हातमा थुके । र आफू बस्ने कुर्सीको टेबुुलमुनी फ्याँके । सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न निषेध गरिएको र हालसालै सार्वजनिक यातायातबाट थुक्न समेत निषेध गरिएका बेला सरकारकै मन्त्रीबाट भएको यस्तो हर्कतले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा च...
काठमाडौं – स्कटल्यान्डका एक ब्यक्तिलाई महिलाले सेक्स अफर गरेर हैरान पारेका छन । ४३ वर्षीय मोहम्मद अवदलाई अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी युवतीले उनीसँग सेक्स गर्न चाहेको सन्देश पठाएका हुन । यसरी महिलाहरु उनीसँग सेक्स गर्न चाहानुको कारण छ, कृत्रिम लिंग । उनको कृत्रिम लिंगप्रति महिलाहरु मोहित भएका हुन। महिलाहरुले कृत्रिम लिंगको अनुभव लिन खोजेका हुन । ४४ वर्षीय मोहम्मदको ६ वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परेपछि लिंग काटिएपछि उनले हालसालै कृत्रिम लिंग राखेका हुन । जब उनीसँग कृत्रिम लिंग भएको हल्ला चल्यो, त्यसपछ...
काठमाडौं – सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट मुसा भगाउन बिरालालाई नियुक्त गरेको खबर सुन्दा तपाइलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर वेलायत सरकारले मुसा भगाउनका लागि दुई बिरालालाई नियुक्त गरेको खबर यथार्थ हो । बेलायतको मन्त्रीपरिषदले मुसाले दिएको दुखबाट मुक्त रहन दुई बिरालालाई नियुक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरु जनाएका छन् । यसअघि बेलायतको डाउनिङ स्ट्रिटस्थित मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुसाले आतंक मच्चाएको छ । मुसालाई त्यहाबाट निर्मूल पार्नका लागि सरकारले इवी र असी नामक दुई बिरालोलाई नियुक्त बताएको छ । ...
धनगढी – तरकारीका लागि बढी प्रयोगमा आउने लौका बढीमा पाँच, आठ वा दश किलोसम्म फल्नसक्छ भनेर सबैले अनुमान लगाउन सक्छन् । तर यहाँका एक किसानको बारीमा २५ किलोको एउटा लौका फलेको छ । धनगढी वसन्त टोलका लालितमान सोपको बारीमा यति ठूलो लौका फलेको हो । केही दिनदेखि यहाँ जारी सुदूरपश्चिम महोत्सव अन्तर्गत कृषि प्रदर्शनी स्टलमा राखिएको यो लौका हेर्नेको भीड लाग्ने गरेको प्रदर्शनी कक्षका किसान बालकुमार रानामगरले बताउनुभयो । स्थानीय जातको यो गोलो लौकाको बोटमा कम्पोष्ट मल प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यति ठूलो लौका...
एउटा कुकुरको मूल्य ११ करोड, देख्नुभएको छ कहिले ?
आयरल्याण्ड – आयरल्याण्डका प्रहरीले एउटा शिकारी कुकुर चोरीको घटनामा संलग्न भएको भन्दै चारजनालाई पक्रेको छ । चोरी भएको कुकुरको मूल्य १० लाख यूरो अर्थात ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । आयरल्याण्डको टिपरेरी काउन्टी नजिकै गोल्डेन भन्ने ठाउँबाट रकेट नामको कुकुर आफ्ना प्रशिक्षकसँग भएकै बेला चोरी भएको थियो । प्रहरीले कुकुर सुरक्षित रुपमा भेटिएको जनाएको छ । निकै तीब्र गतिमा दौडन सक्ने शिकारी कुकुर भएकाले र राम्रो नश्लको भएकाले पनि रकेटलाई विशेष मानिएको छ । शिकारी कुकुरका जानकार फर्चुनले रकेटलाई ...